नेपालमै यस्तो गाउँ जहाँ महिलाहरु जान्छन् विदेश, घर कुरेर बस्छन् पुरुष – Namaste Host
नेपालमै यस्तो गाउँ जहाँ महिलाहरु जान्छन् विदेश, घर कुरेर बस्छन् पुरुष
March 18, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on नेपालमै यस्तो गाउँ जहाँ महिलाहरु जान्छन् विदेश, घर कुरेर बस्छन् पुरुष
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका १ सेलाङका ३६ वर्षीय भीमबहादुर लोप्चनको १७ वर्षको कलिलै उमेरमा छिमेकी राममायासँग बिहे भयो । शुरुका केही दिन त हाँसखेलमै बिते । वर्ष बित्दै गयो तर बच्चा बसेन । उनीहरुमा एक खालको त’नाव पैदा भयो । उनीहरुका धेरै प्रयास असफल भए । यसैगरी झण्डै १० वर्ष बिताए ।
एकदिन राममायाले क’ठोर निर्णय लिएर अर्को बिहे गर्न भीमबहादुरलाई सुल्झाइन् । उनले पनि सहजै स्वीकारे । अन्तत राममायाले आफ्नै श्रीमनको बिहे बहिनी मोतिमायासँग गराइन् । बिहे गराउनुको एउटै कारण थियो बच्चा जन्माउनु । बच्चा भयो भने त्यो परिवारमा छुट्टै खुशी आउँथ्यो । तीन वर्ष अघि एउटा छुट्टै संयोग बन्यो ।
दुवैको केही महिनाको अन्तरालमै ग’र्भ बसेपछि भीमबहादुर तीनछक परे । तीन वर्ष अघि राममाया र मोतीमायाले आठ महिनाको अन्तरालमा एक एक छोरा जन्माए । बच्चा हुँदैन भनेर बूढीले बहिनीसँग बिहे गराइदिइन्, आखिर आठ महिनाको फरकमा बच्चा पायो । मन्द मुस्कानसहित भीमबहादुर त्यो क्षण सम्झिए । छोरा सुदीप र प्रवीन अहिले नजिकैको स्कूलमा कक्षा एकमा पढ्छन् ।
छोराहरु श्रीमानलाई छाडेर दुवै श्रीमती वैदेशिक रोजगारीका लागि अहिले कुवेतमा छन् । निःशुल्क भिसामा उनीहरु दुई वर्ष अघि विदेश गएका हुन् । दुवैजना घरको काम गर्छन् । यता भीमबहादुर दुई छोराको रेखदेख गरी घर कुरुवा बनेका छन् । आफू पनि विदेश जाने चाहना थियो तर भूकम्पले घर भत्काएकाले निर्माणको चरणमा भएर नगएको उनले सुनाए।
भीमबहादुरकी दुई श्रीमती, पेम्बाकी एक श्रीमती मात्रै होइन, कान्छा भाइ निक्मा लोप्चनको श्रीमती सविना पनि कमाइका लागि विदेशमै छिन् । छिमेकी मिलन तामाङकी श्रीमती सलमायाँ पनि कुवेत गएको निक्कै समय भयो । छिमेकी एक जनाको यसैगरी विदेश जाँदाजाँदै आपसी वि’वाद हुँदा दुवै श्रीमतीले छाडेको उनीहरुले बताए ।
सानुकान्छी तामाङकी छोरी सुनमायाँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएकी छिन् । सेलाङ गाउँमा रहेका १९ भूकम्प प्र’भावित परिवारका छ जना महिला वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरुका श्रीमान् घर रुँगेर बस्छन् । गाउँलेका अनुसार पुरुषहरु गाउँमा भए पनि जुगल गाउँपालिकाका धेरै महिला विदेशिएका छन् ।
विगतको मुलुकी ऐनमा श्रीमान् वा श्रीमतीबाट बच्चा नभएको प्रमाणित भएमा, न’पुङ्सक भएमा, तीन वर्षसम्म एक अर्कालाई छाडेमा, पा’रपाचुके भएमा अर्को बिहे गर्न पाइने उल्लेख थियो । मुलुकी अ’पराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ११ को विवाह स’म्बन्धी क’सुरमा भने ब’हुविवाह ब’दर हुने र ब’हुविवाह गर्नेलाई कै’द स’जायको कानूनी व्यवस्था छ ।
उक्त क’सुर अन्तर्गत द’फा १७५ मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक स’म्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न नहुने र कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ । यसरी विवाह गर्ने वा गराउनेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कै’द र रु १० हजारदेखि ५० हजारसम्म ज’रिवाना हुने र बिहे स्वत ब’दर हुने उल्लेख छ ।
उक्त क’सुरको द’फा १७३ मा २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने र गरेमा तीन वर्षसम्म कै’द र रु तीन हजार ज’रिवाना तथा विवाह ब’दर हुने उल्लेख छ । हद म्याद भने तीन महिनाको छ । का’नूनमा का’रवाहीको व्यवस्था भए पनि ग्रामीण भेगमा भने का’नूनबारे जानकार नहुँदा बच्चामै बिहे हुने र ब’हुविवाह हुने क्रम भने रोकिएको छैन । नारायण ढुङ्गाना जनापाती डटकम बाट ।
बिचराʼ ! दाइजोका कारण ७० बर्षे बृद्धसंग बिबाह गर्न बाʼध्य २० बर्षे युवती ,
नेपालमा किन भा’इरल भइरहेका छन् त काण्ड ?
‘म श्रीमतीका कारणले म र्दै छु, उसलाई जसरी पनि कारवाही गर्नु’ भन्ने म्यासेज भाईलाई पठाएर मनकुमारले गरे देह त्याग (भिडियो हेर्नुस्)
ह,राइ रहेकी बिना सापकोटाको प्रेमी प्रबेशको बारेमा आयो यस्तो गो,प्य कुरा (भिडियो सहित)
उर्लाबारी प्र,क,रण – दाइको न्या,यका लागी जे गर्न पनि तयार छु भन्दै बहिनी सडकमा, आ,क्रो,सीत पि,डितले घेरे प्रहरी चौकी (भिडियो सहित)